Internet ukuphonononga ingaba omnye oldest Web amacandelo
Imfuneko entsha Dating-intanethi baqalisa ukukhulisa
I-imfuneko ngu ezaziwayo, yenza kombane – waqalisa kubonakala Dating zephondo. Ekuqaleni kwaba i-i-american projekthi, ngokomgaqo-sele ngowe, France, yokuqala a Dating site waba inkonzo”Ngesondo Dating”yamiselwa kwi.Xa waba cacisa ukuba lenkqubo ka-intanethi Dating ayiyi kuphela ethandwa kakhulu, kodwa kanjalo highly profitable iinkonzo ukuze anike le nkonzo, waqalisa ukukhula nge-leaps kwaye bounds. I-bale mihla Internet umsebenzisi lowo ufuna ukuya kuhlangana kunye kuba budlelwane asebenzise i-Intanethi, oyikhethileyo siya kuba zaziswe ngaphezu a dozen Dating iinkonzo. Ranking phezulu uninzi ethandwa kakhulu Dating zephondo-Intanethi ze-Intanethi Forte ziya kukunceda na ukufumana ezilahlekileyo kuyo yonke le motley zoo kwaye ufumanise ukuba zeziphi Dating iinkonzo icacile ukuba devote zakho zexabiso ixesha.
I-umyinge we Dating zephondo ziya kuba ranked kwi-usihla ukuze kwaye engundoqo umbutho we uthathelo-yi ngenyanga kwiikhosi yecebo ka-Russian-ukuthetha ababukeli bomdlalo bangene. Ingqokelela yamanani borrowed ukusuka reputable iinkampani web abaphononongi kumbuzo ayo ukuba semthethweni ayikho kuyimfuneko. Ukuba Umfundi kwaba cacisa ukuba kutheni isiseko umyinge wazuza kwiikhosi: yindawo engcono isibonisi ye-imfuneko kwaye popularity ka-Internet icebo. Ngakumbi utyelelo kwi Dating site, ngakumbi yayo abasebenzisi, kwaye ke ngoko, ngakumbi i-isenzo sempumelelo ukuhlangabezana kwaye kuba budlelwane.
Njengoko ubona, umyinge we Dating zephondo njengoko ka- kuzo zonke itshintshile. Nangona lokuqala izikhundla zihleli kuba the giants oku niche, ngamanye imigca zithe enkulu”shuffling”: phezulu waphula site”Ngesondo Dating”, kunye ne-intanethi”Asian Dating”sele zilawulwe oza kuphulukana nayo abasebenzisi, kwaye flew ngaphandle zethu Phezulu.
Kodwa kukho omtsha nxaxheba ye-umyinge zephondo Dating:”Dating”ngoku kwi eli- indawo. Red made igqityiwe ulwazi malunga abathathi-nxaxheba”Phezulu”, ndidibanise ulwazi malunga”newbie”, ngoko ke sithi, mema ngoku ukufunda kakhulu ngoku ulwazi
← Casual Dating Erotic Dating ngaphandle naziphi na izibophelelo ukuba sayina ngoku. Ividiyo Dating
Inkqubo yezemfundo kwi-USA ulwazi kwi i-inkqubo yezemfundo kwi-United States unyaka ngaphesheya →